Muxuu ku Fashilmay Madaxweyne Farmaajo. – Goobjoog News
Soomaaliya waxay ka baxday dowladdii ku-meel gaarka ahayd 2012 inkastoo dastuurka dalka uu wali ku-meel-gaar yahay, waxayna Feebaraayo 08, 2017 dooratay madaxweynihihii labaad oo rasmi ah oo hoggaaminaya dowlad federaal ah.
Madaxweyne walba ee la doorto waxaa looga fadhiyaa in uu gaarsiiyo dalka hiigsi la sugayay in la gaaro, dowladda uu hoggaaminayo madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxaa looga fadhiyay inay dhammeystirto dastuurka, dhisto ama yagleesho hay’adaha dowliga ah ee ku xusan dastuurka, kala wareegto AMISOM amniga dalka iyo inay gaarsiiso dalka doorasho qof iyo cod ah.
Halkan waxaan kaga hadli doonnaa hay’adaha dowliga ah ee dhimman oo laga sugayay in uu dhiso madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, Maxayse ku soo kordhinayaan hannaanka dowliga ah haddii la dhiso hay’adaha dastuurka ku xusan ee madaxa-bannaan.
Dhismaha Guddiyada Madaxa Bannaan:
Dastuurka Soomaaliya waxa uu sheegayaa guddiyo madax bannaan kuwaasi oo ku xusan qodobka 110aad ee dastuurka ku-meel-gaarka ah ee Soomaaliya, waxayna tilmaamaysaa farqadda 1aad ee qodobka 110aad ee dastuurka ku-meel gaarka ah sidan:-
“Guddi madax bannaan waa hay’ad ka madax bannaan xukuumadda ama xakameyn siyaasadeed awoodna u leh adeegsiga aqoontooda xirfadeed ee la xiriira hawlahooda u gaarka ah”.
Guddiyada madaxa bannaan ee ku xusan dastuurka ayaa kala ah:-
Golaha adeegga Garsoorka
Guddiga xuquuqul aadamiga
Guddiga la dagaalanka musuqmaasuqa
Guddiga adeegga Baarlamaanka
Guddiga xudduudaha iyo Federaalka
Guddiga isku-xirka xukuumadaha
Guddiga qaran ee madaxa bannaan ee doorashooyinka
Guddiga ammaanka Qaranka
Guddiga Runta iyo dib-u-heshiisiinta
Guddiyadaan ayaa u baahan in lagu dhiso sharciyo gooni ah oo baarlamaanka la marsiiyay, kaddibna magacaabistooda ay ka tashadaan dowladda dhexe iyo maamullada dalka isla-markaana ay helaan xubnaha guddiga codka kalsoonida baarlamaanka, madaxweynuhuna ku soo-saaro faafin rasmi ah.
Ka hor 08 Feebaraayo 2017, waxaa dhisnaa Guddiga doorashooyinka madaxa bannaan, guddiga xudduudaha, iyo guddiga dib-u-eegista dastuurka , waxaa kale oo la ansixiyay xeerarkii lagu dhisay guddiyada madaxa bannaan ee adeegga garsoorka iyo xuquuqul insaanka.
Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxaa laga filayay inuu dhammeystiro illaa 7 guddi oo dhimman kuwaa oo muhiim u ahaa dib u dhiska dowladnimada Soomaaliya iyo sarreynta sharciga, haddaba muxuu ka qabtay?
Xukuumadda uu hoggaamiyo madaxweyne Farmaajo waxay baarlamaanka u soo gudbisay xeerarka lagu dhisayay guddiyada madaxa bannaan ee la dagaalanka Musuqmaasuqa iyo hay’adda hanti-dhawrka qaran. kaliya waxa uu saxiixay madaxweynaha xeerka lagu dhisayo hay’adda la dagaalanka musuqa, waxaana wali xafiiskiisa yaalla sharciga hanti-dhawrka oo muhiim u ah hufnaanta maaliyadda dalka.
Maxamed Mukhtar Madaxa machadka SIPAM oo ay Goobjoog kala hadashay dhismaha hay’adaha dowladda ayaa tilmaamay in Soomaaliya baahi weyn u qabto dhismaha hay’adaha dowliga ah, kobcinta aqoonta shaqaalaha dowladda, iyo dhisidda kalsoonida dadka ka dhaxeysa. Mukhtaar oo hadlaya ayaa yiri “ Marka la dhaho maxaa ka dhimman dhismaha hay’adaha dowliga ah waa wax walba ayaa dhimman shaqooyin aad u badan ayaa yaalla, laakiin midda ugu muhiimsan oo mar walba caqabad ah waa wada hadal la’aanta mar walba oo uu dib u dhaco wada-hadalka waxaa dib u dhacaya dhisidda iyo yagleelidda hay’adaha dowliga ah”.
Maxamed Mukhtaar ayaa tilmaamay in loo baahan yahaya in la is-waafajiyo dastuurrada dowladaha xubnaha ka ah dowladda iyo kan dowladda dhexe.
Dr. Liibaan Xuseen oo ah xubin firfircoon oo ka tirsan bulshada rayidka ah, ahna bare jaamacadeed kuna taqasusay sharciga oo ay Goobjoog ka wareysatay ahmiyadda dhammeystirka dhismaha hay’adaha dowliga ah oo ku dheeraaday muhiimadda ay leedahay in la dhiso hay’addaha dastuuriga ah ayaa sheegay inay qeyb weyn ka qaadanayaan xasilloonida siyaasadda, isku dheellitirka awoodaha laamaha dowladda iyo dowlad wanaagga dalka.
Dr. Liibaan waxa uu aad ugu dheeraaday muhiimadda ay leedahay dhisidda hay’adda adeegga garsoorka taasi oo uu sheegay inay muhiimad gooni ah ugu fadhiso horumarinta caddaaladda dalka.
“guddiyadu waa wixii keeni lahaa isku-dheellitirka awoodaha iyo in mar walba la isla-xisaabtamo iyo wax allaala wixii muran siyaasadeed yareyn lahaa” Dr. liibaan ayaa yiri.
Gudbinta adeegga dadweynaha iyo geeddi socodka hawlaha dowladda mar uu ka hadlay Dr. Liibaan ayaa sheegay in guddiyada madaxa bannaan ka muhiimsan yihiin wasaaradaha loona baahan yahay in dadku fahmaan muhiimadda hey’addaha madaxa bannaan.
“guddiga adeegga garsoorka waa muhiim in la dhiso, haddii garsoorku hagaago markaa ayuu muwaaddinku heli karaa caddaalad dowladnimadeennuna ay taabba geli kartaa”. Dr. Liibaan Xuseen Ciise.
Mar wax laga weydiiyay Dr liibaan iyo Wasiir Mukhtaar cidda leh in la dhiso hay’adaha dastuurka ku xusan si loo gaaro heykal dowladnimo oo dhammeystiran ayay ugu baaqeen in dhamaan qeybaha bulshada iska kaashadaan sidii loo yagleeli lahaa hey’adaha madaxa bannaan ee dastuurka ku xusan.
Mar aannu wax ka weydiinay xalka khilaafka siyaasiga ah ayuu Dr. Liibaan sheegay in wadashaqeyn la’aanta dowladda dhexe iyo maamullada dalka, wadashaqeyn la’aanta madaxweynaha iyo hey’adaha dowladda iyo khilaafka u dhaxeeya golaha baarlamaanka ay sal u tahay dhammeystir la’aanta hey’adaha dowliga ah.
Marka la eego xaalka siyaasadda dalka inta uu xilka hayay madaxweyne Farmaajo waxaa khilaaf siyaasadeed hareeyay Baarlamaanka, maamullada iyo dowladda dhexe. Wuxuuna khilaafku saameyn taban ku yeeshay:-
Dhammeystirka dib u eegista Dastuurka
Dhammeystirka Shuruucda Federaalka ah
Dhismaha hey’adaha Dastuuriga ah
Dhismaha ciidanka xoogga dalka
Gaarsiinta dalka doorasho qof iyo cod ah.
Horumarinta dhaqaalaha iyo amniga dalka.
Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa markii uu ku jiray ololaha waxa uu ballanqaaday inuu dhisi doono garsoor madax bannaan, iyo hey’adaha kale ee muhiimka u ah sarreynta sharciga.
W/Q: Xasan Maxamuud
Ciidamada Talyaaniga Oo Badbaadiyey 3 Kun Oo Tahriibayaal Ah
Erdogan Iyo Trump Oo Ku Heshiiyey Ladagaalanka Argagixisada
Dhageyso: Wasiir Cawad “Qatar Ayaa Shir Guddoomiye Ka Ahayd Shirkii Maanta”
Akhriso: 74-sano Guuradii Aas-aaska Ciidanka Booliika Soomaaliyeed
initiating use upon another proverbial generic cialis 5mg online 5. buy cialis soft Ntsvlb euwjvq cialis com tadalafil tablets
do i have ed natural herbs for ed online meds for ed
mexican viagra viagra where to buy viagra
viagra online canadian pharmacy buy viagra from canada 100mg viagra
cheapest viagra online viagra canada online doctor prescription for viagra
errectile disfunction ED Pills Without Doctor Prescription 100mg viagra without a doctor prescription
comfortis for dogs without vet prescription generic viagra canadian drug pharmacy
treatments for ed ED Pills Without Doctor Prescription male ed pills
ed medication online generic ed pills vacuum pumps for ed
drugs that cause ed generic ed pills generic ed pills
https://prednisonegeneric20.com/ prednisone uk price
Leave a Reply to EddieSak Cancel reply
Wafdigii Soomaaliya u matalayey shirkii Masar oo dalka dib ugu soo noqday
viagra black market 365pills generic viagra where can i get...
cialis with dapoxetine online canada pharmacies online pharm...
viagra australia newest viagra viagra espanol [url=https://c...
usa viagra viagra under 50 buy viagra online [url=https://ca...
[url=https://cialisah.com/]generic cialis in canada[/url] do...